कसरी हिरो बने रवि ? – OMKARTIMES
कसरी हिरो बने रवि ?
ओमकार २०७६ भाद्र २, ०८:५६ बजे
रवि एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन चाहन्थे । केही यस्तो काम गर्नुर्पयो, जसका कारण आफ्नो नाम रहोस्। त्यसपछि उनले ६२ घण्टा १२ मिनेटसम्म कार्यक्रम चलाएर विश्वमा सबैभन्दा लामो समयसम्म टक शो होस्ट गरेको विश्व कीर्तिमान बनाए। यो सन् २०१३ को कुरा थियो ।
तर विश्व रेकर्डले भन्दा पनि उनलाई चिनाउने काम चाहिँ ‘सीधा कुरा’ले नै र्गयो। यसको सुरुवात भने ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ बाट भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए त्यतिबेला। सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, कार्यक्रम अर्कैले चलाए। त्यही लोगो र त्यही सेटमा ।
उनले ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्री’सँग नभई ‘सीधा कुरा जनतासँग’ चलाए उस्तै लोगो र उस्तै सेटमा। त्यो नै उनको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो। जनतालाई आफ्नो कुरा यही कार्यक्रममा आउँछ, आफ्नो समस्याको समाधान यही कार्यक्रमले गर्छ भन्ने विश्वास जित्न सफल भयो यो कार्यक्रम।
नेपाली समाजलाई सबैभन्दा छुने विषय – वैदेशिक रोजगारीको ठगी, विमानस्थल अध्यागमनको बेथिति अनि भ्रष्टाचारमा उनी आक्रामक भएर लागे। लाइभ अन्तर्वार्तामा झाँको झार्ने कामदेखि अलपत्र परेकाहरुको उद्दारसम्मका घटनाले नै उनलाई हिरो बनायो। समस्या समाधान हुने आशामा मान्छेहरुको भिड प्रहरी चौकीमा भन्दा बढी उनको अफिसमा देखिन थाले ।
निराशा नै निराशा फैलिरहेको समाजमा रविको छवि ‘आशा’ जगाउने बन्दै गयो। त्यसैको प्रतिबिम्ब हो अहिले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा मात्र राख्दा पनि उनलाई फँसाउन खोजियो भन्दै सडकमा उत्रिएको भिड। किनभने सत्य र तथ्य जे सुकै भए पनि भिडका हरेकले आफै न्यायाधीश भएर फैसला गरिसकेका छन्।
जनकपुरमा बम आतंक
बलिउडकि कलाकार गिता सिद्धर्थको निधन
जडिबुटी खोज्न गएका एकै गाउँका १२ जना बेपत्ता
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लडेपछि
आज मंसिर ३० गते सोमबार महादेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशिफल
कलाकार केशव भट्टराईको निधन
पूर्वराजा शाह पूर्वी तराईको भ्रमणमा निस्कदै
काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झापा भ्रमणमा जाने भएका छन्। उनी पूर्वरानी कोमल शाहसँग पूर्वी जिल्ला झापाको दमकमा जान लागेका हुन्। शाह आगामी हप्ता
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युुतीय तार भूमिगत गरिने
काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युतीय तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य पुसदेखि सुरु गर्ने भएको छ । विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून
अज्ञात समूहद्वारा दुई वडा कार्यालयमा आगजनी
भोजपुरको दुई वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । रामप्रसादराई गाउँपालिका–२ धोद्लेखानीको वडा कार्यालय र पौवादुङमा गाउँपालिका–३ च्याङ्ग्रेको वडा कार्यालयमा गएराति अज्ञात समूहले आगजनी
मुलुकलाई दिलाएको सफलता प्रति खेलाडीहरुलाई बधाई : पूर्वराजा शाह
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाली खेलाडीहरुको उच्चकोटीको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्नु भएको छ । उहाँले मुलुकलाई दिलाएको सफलताप्रति खेलाडीहरुलाई
आफुलाई `सिद्धबाबा´बताउने गिरीका कर्तुतनै कर्तुत
काठमान्डौ , सोलुखुम्बुको जुबुमा ०३१ साल फागुन १९ मा जन्मेका कृष्णबहादुर गिरी नै अहिलेका बलात्कार अभियोग लागेका कृष्णदास हुन् । उनी केही समय अघिसम्म आफूलाई
सम्पादक: जानुका निरौला
सह- सम्पादक: सान नेपाल
ईमेल ठेगाना: omkar.times21@gmail.com